Rosiana Mpikatroky Ny LGBT Voasazy Handoa Onitra Noho Ny Fanaovana ‘Propagandin’ny Fahapelahana’ Antserasera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Janoary 2016 4:51 GMT
Ny sainan'ny avana, marika iray iraisan'ny LGBT. Sary avy amin'ny Flickr, CC BY 2.0.
Hitan'ny fitsarana iray ao Murmansk ho meloka tamin'ny fanapariahana ny “propagandin'ny fahapelahana amin'ny zaza tsy ampy taona” amin'ny aterineto i Sergey Alekseenko, mpikatroka. Ankehitriny izy tsy maintsy mandoa onitra 100.000 robla (manodidina ny $1260 Amerikana).
Tamin'ny Desambra 2015 i Alekseenko, filoha teo aloha tao amin'ny fikambanana tsy mitady tombombarotra Maximum sakaizan'ny LGBT ao avaratra andrefan'ny faritanin'i Murmansk, dia voampanga ho nanitsakitsaka ny lalàna rosiana amin'ny fampielezana fifandraisana ara-nofo tsy nenti-paharazana amin'ny tanora tsy ampy taona. Ny vesatra iampangana an'i Alekseenko dia nifototra tamin'ny pejin'ny fikambanana tao amin'ny pejy VKontakte. Nitatitra ny tambajotra LGBT Rosiana raha tamin'ny raharaha Alekseenko fa ireo nametraka fitoriana dia ny ray aman-drenin'ireo tsy ampy taona ireo izay nolazaina fa nitsidika ny pejy VKontakte ary nahita ny lahatsoratra.
Ny fehezanteny nanafintohina tao amin'ny lahatsoratra VKontakte dia mivaky manao hoe: “Izany pelaka izany dia olona sahy sy matoky izay manana fahamendrehana sy fahatokisan-tena.”
Mivaky toy izao ny fehezanteny manafintohina : “Izany pelaka izany dia olona sahy sy matoky izay manana fahamendrehana sy fahatokisan-tena.”
Ny mahaliana amin'izy ity, ny lazaina ho “propagandy” dia avy amin'ny tatitry ny Roscomnadzor, sampan-draharaham-panjakana rosiana mandrindra ny fampitam-baovao, miresaka momba an'i Elena Klimova, mpanangana ny vondron-tanora mpanohana ny LGBT “Children-404″. Miatrika ny fiampangana mitovy amin'ny an'i Klimova i Alekseenko, sady misy itovizana koa ny toe-draharaha.
Tamin'ny tatitra momba an'i Klimova, nanamafy ny Roscomnadzor fa ireo votoaty nozarain'ny vondrona “dia mety hitarika ny ankizy hino fa izany pelaka izany dia midika hoe sahy, matanjaka, mahatoky, vonona, manana fitokisan-tena …”
Hatramin'ny nivoahan'ny didim-pitsarana dia notsikerain'i Alekseenko ny fanapahan-kevitra tamin'ny filazana fa nanitsakitsaka ny paikam-pitsarana ny manampahefana, satria tsy nisy tsy ampy taona na ny ray aman-dreniny nanontaniana.
Navoitran'i Alekseenko ihany koa fa ny vesatra niampangana azy tamin'ny voalohany dia amin'ny mahafilohan'ny fikambanana efa tsy misy intsony amin'izao fotoana izao azy. Tamin'ny Oktobra 2015, rehefa notondroin'ny Minisiteran'ny Fitsarana azy ho “mpitsikilom-bahiny, dia nitsahatra tamin'ny asa maha-fikambanana azy ny Maximum. Ankoatra izany, ny pejin'ny Maximum ao amin'ny VKontakte dia voamarika hoe “18+” izay midika fa ny mpitsidika ny pejy dia tsy maintsy manamarina fa mihoatra ny 18 taona izy mialoha ny ahafahany mijery ny votoatiny.
Ny lalàna ao Rosia mandrara “ny fampielezana propagandy mampiroborobo ny fifandraisana ara-pananahana tsy ara-pombandrazana amin'ny tsy ampy taona” dia neken'ny antenimiera tamin'ny Jona 2013. Nanaraka tsy ela ny lalàna federaly rehefa maro ireo faritra rosiana no naka fepetra fanasaziana ara-pitantaranm-panjakana amin'ny fampielezana ny fahapelahana.
Tamin'ny Septambra 2015, Nampian'ny Roscomnadzor tao amin'ny lisitra mainty voarara ao Rosia ny fikambanana dimy ao amin'ny VKontakte mifandraika amin'ny LGBT noho ny filazana fa nampiroborobo fifandraisana ara-pananahana tsy ara-pombandrazana—ka ao anatin'izany ny vondrona “Children-404″.
Tamin'ny Novambra 2015, depiote Rosiana roa tao amin'ny Duma avy amin'ny Antoko Komonista no nanolotra volavolam-panitsiana tao amin'ny Lalàm-Panitsakitsahana Ara-panjakana, izay handrara “ireo endrika fifandraisana ara-nofo imasom-bahoaka” toy ny fifampitantanana na fifanorohana—Fanaovan-dalàna sahisahy indrindra amin'ny famelezana ny fahapelahana ao Rosia hatramin'izao. Maro ireo depiote mpikamban'ny Duma no nanandratra ny feony nanohitra ny volavolan-dalàna, ary tamin'ny 18 Janoary 2016 dia nandidy ny hanintsana ilay volavolan-dalàna nandritra ny famakiana voalohany azy ny komity ao amin'ny Duma misahana ny fanaovan-dalàmpanorenana.